Ny Galaxy Note FE dia mety hahatratra firenena maro kokoa taorian'ny fahombiazany tany Korea Atsimo | Androidsis
Azo antoka fa manana 2017 mahafinaritra i Samsung, ary mbola eo antsasaky ny lalana isika. Ny zoma lasa teo dia namidy ny smartphone Galaxy Note FE na "Fan Edition"Raha lazaina amin'ny teny hafa, io Galaxy Note 7 io tamin'ny taon-dasa dia tsy maintsy nesorina ary ankehitriny, naverina tamin'ny laoniny tsara ary miaraka amin'ny fanovana vitsivitsy, dia misy ao amin'ny firenena misy ny orinasa miaraka amin'ny fihenan'ny vidiny.
Ny orinasa napetraka amidy 400.000 eo ho eo amin'ity terminal ity any Korea Atsimo ary toa "manidina" hiala ireo talantalana izy ireo avy amin'ny fivarotana nahitana azy. Be loatra ka tombanana fa ny Galaxy Note FE dia nampitombo ny fampihetseham-batana isan'andro amin'ny 60 isan-jato hatramin'ny nanombohany.
Raha ny fantatra dia mpampiasa Koreana Tatsimo an'arivony no nampiseho ny fahalianany hahazo Galaxy Note FE izay misy amin'ny vidiny mitovy amin'ny 610 dolara (20 isan-jato ambany noho ny tamin'ny fandefasana azy tamin'ny taon-dasa), miaraka amin'ny maodely Black Onyx sy Blue Coral an'ny Note 7 nohavaozina izay be mpitia indrindra amin'ireo mpividy, raha ny marina, dia efa namidy tany amin'ny magazay sasany.
Samsung dia nisafidy ny hivarotra an'ity Galaxy Note FE ity a "fanontana Misy fetrany", izany hoe, fotoana iray ahazoan'ny tena mpankafy ny andian-tsarin'i Galaxy Note hahazoana singa iray amin'ity telefaona ity izay efa manan-tantara ao anatin'ny orinasan-telefaona finday. Noho izany ny anarany, "Fan Edition", ary noho izany ny mpiasan'ny orinasa dia nanambara tamin'ny The Investor fa, raha vantany vao lany ny singa apetraka any Korea Atsimo dia tsy ho valiny intsony.
Ary na dia mamorona tsy fahampian'ny artifisialy ny terminal aza ny orinasa (mahatsikaiky taorian'ny nisintomany hiala ny tsena noho ny antony ara-piarovana) dia nisy olona iray izay nanana fahalalana momba ny drafitr'i Samsung nilaza tamin'ny The Investor fa Ny Galaxy Note FE dia azo alefa manerantany amin'ny faran'ity volana ity. Ary na dia tsy fantatra aza ny firenena hahatongavany, dia azo antoka fa ho voafetra amin'ny tsena vitsivitsy.
Hividy ilay Galaxy Note FE raha Samsung mandefa azy any amin'ny firenenao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Galaxy Note FE dia mety hahatratra firenena maro taorian'ny fahombiazany tany Korea Atsimo
Sony Music dia hanampy fanampiana ho an'ny Android Auto atsy ho atsy